David Silva oo ammaan weyn ka helay xiddig ka tirsan kooxda Manchester City – Gool FM
(Manchester) 26 Abril 2020. Xiddiga kooxda kubadda cagta Manchester City ee Raheem Sterling ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in qof walba oo Sky Blues ah uu u xiisi doono David Silva, wuxuuna carabka ku adkeeyay inuu tusaale u yahay xirfadleyda kubadda cagta oo dhan.
34 jirka reer Spain ee David Silva ayaa ku dhow inuu ka tago kooxdiisa haatan ee Manchester City, maadaama qandaraaskiisa uu dhacayo xagaaga soo socda.
David Silva ayaa u soo dhaqaaqay kooxda Manchester City xagaagii 2010, isagoo kaga soo biiray naadiga Valencia ee dalka Spain, wuxuu kula guuleystay Sky Blues tan iyo xilligaas 4 jeer oo horyaalka Premier League ah, FA Cup 2jeer, Carabao Cup 5 jeer, iyo koobka FA Community Shield oo 2 jeer ah.
Sida laga soo xigtay shabakada “Sky Sports” ee dalka England xiddiga reer England ee Raheem Sterling ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Halka arrin ee aan xaqiiqdii ka bartay David Silva ayaa ah sida aan ku noqon karo qunyar-socod”.
“Waa cayaaryahanka ugu daacadsan ee aad waligaa arki doontid, marka loo fiiriyo abaal-marinada iyo tartammada uu ku guuleystay xirfadiisa kubadda cagta”.
“Waa tusaale fiican, uma ahan kaliya sida loo noqdo ciyaaryahan weyn, laakiin sidoo kale sida loo noqdo laacib aad u fiican eek u guuleystay koobab badan”.
“Aad ayaan ugu xiisi doonaa, sababtoo ah wuxuu ina siiyay farxad badan, laakiin hadaad rabto inaad sidaas oo kale sameyso, waa inaad had iyo jeer ilaaliso qunyar-socod nimadaada oo aad koobab ku guuleysataa”.